जुन शहरमा ६६ दिनपछि निस्कियो सूर्य… त्यो पनि केही घण्टाका लागि ! - Kohalpur Trends
जुन शहरमा ६६ दिनपछि निस्कियो सूर्य… त्यो पनि केही घण्टाका लागि !
६६ दिनसम्म पनि सूर्य निस्किएन भन्दा तपाईलाई विश्वास नलाग्ला । तर यो कुरा सत्य हो । यो शहरको नाम हो उल्कियाविक । जो अमेरिकाको अलास्का राज्यमा रहेको छ । उल्कियाविकमा ६६ दिनपछि एक घण्टाका लागि सूर्य निस्किएको थियो ।
त्यसपछि फेरि सारा क्षेत्र अँध्यारो भयो । त्यहाँ धेरैजसो मेक्सिकोका मानिस बस्ने गर्छन् । उल्कियाविकमा १९ नोभेम्बर २०२० मा अन्तिमपटक सूर्य निस्किएको थियो । २० नोभेम्बरबाट लिएर २२ जनवरी २०२१ सम्म त्यहाँ पूरा रुपमा अँध्यारो भयो । यति धेरैपछि सूर्य उदाउनुको कारण आर्कटिक सर्कलको उचाई धेरै छ । ध्रुवीय क्षेत्र भएको कारणले चिसोको मोसममा आकाश माथि जान पाउँदैन ।
यो पनि : चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारः निर्माणस्थल खाली गर्ने काम सकिँदै
काठमाडौं । कलङ्की–धोबीखोला सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्ने काम दुई प्रतिशत बाँकी रहेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार गरिने सो सडकमा पर्ने महाराजगञ्ज क्षेत्रमा पर्ने केही घरका कारण निर्माणस्थल पूरै खाली भइनसकेको हो । ती घरको मुआब्जाका विषयमा छलफल भइरहेको काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाले जनाएको छ । योजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका निकायसँग छलफल गरिरहेको योजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँ रहेका घरमध्ये सात घरको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन प्राप्त भएको छ । उनले भने, ‘मूल्याङ्कन भइसकेको घरको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’
जम्मा ११ दशमलव छ किमी लम्बाइको सडकमध्ये २४४ मिटरमा निर्माणस्थल खाली गराउन नसकिएको योजनाले जनाएको छ । अरू कतिपय संरचना हटाइरहेको भए पनि त्यसले चिनियाँ टोलीलाई निर्माण अघि बढाउन बाधा नपुग्ने प्रमुख सुवालले बताए । सो सडकमा विद्युत् प्राधिकरणले तार जमीन मुनि राख्ने काम गरिरहेकामा त्यो मुख्य सडक बाहेकको सहायक सडकमा पर्छ । प्राधिकरणले तार सार्ने काम गत वर्षबाट शुरुआत गरेको थियो । बाँकी स्थानमा पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । उनले भने, “मुख्य लेनमा काम भइरहँदा पनि सहायक लेनको काम गर्न सकिन्छ ।”
अहिले उक्त सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका रुख काटिएको छ भने झण्डै ४०० पोल सार्ने काम सकिएको छ । उहाँका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पोल त्यहाँबाट सारिरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमार्फत खानेपानीका पाइप सार्ने काम भइरहेको छ । सडकको अधिकार क्षेत्रमा घरसँगै अस्थायी टहरालगायत संरचना हटाउनु पहिलो चरणको विस्तारमा जस्तै यो चरणमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको योजनाले जनाएको छ ।
स्वयम्भू, ठूलोभयाङ, महाराजगञ्ज चोकलगायत स्थानमा सडक छेउमा संरचना हटाउनुपर्ने देखिएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माण गरेसँगै चीन सरकारले चक्रपथको दोस्रो खण्डका रुपमा कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक विस्तारमा चासो देखाएको थियो । भूकम्प पहिले नै कोटेश्वर–कलङ्की सडक विस्तारको काम शुरु भए पनि भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । सडकमा रहेका खानेपानीका पाइप, ढल, विद्युत्का पोल र रुख समयमै हटाउन नसकिएकाले पनि काममा बाधा पुगेको थियो ।
सडकमा दुई ‘अन्डर पास’, प्रत्येक किलोमिटरमा आकासे पुल र मुख्य लेनमा बीचमा डिभाइडर हुने गरी सडक विभागले प्रस्ताव गरेको छ । सडक निर्माणस्थल खाली गरेर विभागले हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै चिनियाँ टोलीले निर्माण शुरु गर्ने बताइएको छ । पहिलो चरणको विस्तार सडकमा रहेको कमीकमजोरी हुन नदिने गरी डिजाइन गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । आठ लेनको सडकमा कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा जस्तै मुख्य चार लेन र सहायक चार लेन गरेर जम्मा आठ लेन नै रहनेछ । पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडकलाई सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकामा यस सडकमा डिभाइडर राखिने भएको छ । पहिलो चरणमा डिभाइडर नहुँदा दुर्घटना भएका गुनासो आएकाले यस खण्डमा राख्न लागिएको हो ।
Previous Previous post: सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्रको जित भएको छ : विवेकशील पार्टी
Next Next post: सर्वोच्चको फैसलालाई जनमोर्चाले गर्‍यो स्वागत